Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika oo faahfaahiyey weerar ay ka geysteen buuraha Golis… – Hagaag.com
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika oo faahfaahiyey weerar ay ka geysteen buuraha Golis…
Dowladda Mareykanka ayaa faah faahisay duqeyn dhinaca Cirka aheyd oo diyaaradahooda aan duuliyaha laheyn ee Drones-ka ay ka geysteen maalintii Ciida buuraha Golis ee gobolka Bari ee maamulka Puntland.
Agaasime kuxigeenka howl-gallada ee Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM), ayaa sheegay in weerarkaas oo lala eegtay goob ay ku dhuumaaleysanayeen Kooxda Daacish looga dilay Lix xubnood oo Daacish-ta Soomaaliya kamid ah.
Jeneral William P. West waxa uu sheegay iney sii wadayaan weerarada ay la eeganayaan Kooxaha argagixisada inta laga ciribtirayo midka u danbeeya, si looga baaqsado cabsi laga qabo iney geystaan weeraro ka dhan ah dowladda Soomaaliya oo saaxiibadeeda taageera.
“Waxaan sii wadi doonnaa inaan cadaadis saarno shabakadaha argagixisada Soomaaliya, si dowladnimada ay u hanaqaado” ayuu yiri Jeneral William P. West.
Mareykanka waxa uu sheegay ineysan jirin wax khasaare ah oo dadka Shacabka ah ka soo gaaray duqeyntan oo kaalin ay ku leheyd dowladda Soomaaliya, waana duqeynta 7-aad oo Mareykanka bil gudaheed uu Daacish kula eegto gobolka Bari.